Arianisma (teolojia) - Howling Pixel
Ny arianisma dia teolojia kristiana tamin'ny taonjato faha-4 izay nampianatra fa ny Ray (Andriamanitra Ray) dia Andriamanitra tokoa, fa olombelona manana ampaham-pomban'Andriamanitra fotsiny ihany ny Zanaka (i Jesosy Kristy).
Niezaka hamelatra ny tenim-pinoan'ny Trinite sady nambaran'ny Fiangonana ofisialy ho fampianaran-diso ny arianisma tamin'ny taona 325 tamin'ny konsily tao Nikea.
Ny teny hoe arianisma avy amin'ny anaran'ny mpamorona azy, dia i Ariosy na Ario (latina: Arius), teolojiana tao Aleksandria, izay niditra an-tsehatra tamin'ny adihevitra momba ny Trinite, indrindra ny maha Andriamanitra na tsia an'i Jesosy Kristy, tamin'ny taona 319.
Ny fampianaran'i Ariosy sy ny fielezan'izany
Ny fampianaran'i Ariosy
Tamin'ny fotoana niforonan'ny arianisma dia tsy nisy ny fampianarana momba ny fifandraisan'ny Ray sy ny Zanaka. Nisy noho izany ny adihevitra teo amin'ny patriarkan'i Aleksandria, atao hoe Aleksandra, sy i Ariosy ny amin'izany. Araka ny hevitr'i Ariosy dia tsy mifangaro ny persona telon'ny Trinite satria Andriamanitra Ray ihany, izay sady tsy natao no tsy nateraka, no tena Andriamanitra. Tsy mitovy sobstansa amin'ny Ray ny Zanaka (i Jesosy) izay manam-pisiana tsy mandrakizay fa noforonina sahala amin'ny zavaboary rehetra. Nisy araka ny sitrapon'ny Ray izy sady zanaka natsangan'ny Ray (jereo: adoptianisma).
Natao sesitany tany Iliria noho izany fiheverany izany i Ariosy tamin'ny taona 325 nefa niditra tao amin'ny Fiangonana manontolo ny arianisma sy ny ady hevitra momba izany. Nohelohin'ny emperora Teodosio I ny arianisma tamin'ny taona 379 manerana ny fanjakany. Tsy foana anefa ilay fampianarana nandritra ny taonjato roa tao amin'ireo vahoaka barbara (indrindra ny Visigoty, ny Vandala, ny Borgonda, ny Lombarda ary ny Ostrogoty; tsy isany ny Franka sy ny Anglo-Saksona ary ny Soeva) niova ho kristiana noho ny asa nataon'ny mpitodra fiangonana ariana.
Ireo endriky ny arianisma
Tamin'ny taona 359, nandritra ny konsily natao tao Rimini sy tao Seleokia dia lasa fampianarana marina tao amin'ny Fanjakana ny arianisma. Niady anefa ny mpomba ny arianisma ka nisaraka ho antoko roa.
Ny homoiosisma sy ny homeisma
Ny antoko voalohany tamin'ny arianisma dia ireo avy any Atsinanana izay manaraka ny Faneke-mpinoana nikeana nefa misalasala ny amin'ny fampiasana ny teny grika hoe ὁμοούσιος / homoousios (latina: consubstatialita "fitoviana sobstansa", "fitoviam-pomba") ao amin'ilay fanekem-pinoana nefa tsy hita ao amin'ny Soratra Masina. Ireto indray dia nizara roa ka ao ireo mandanjalanja ka momba ny homoiosisma izay milaza fa manana sobstansa hafa sahalahala fa tsy mitovy (grika: ὁμοιούσιος / homoiousios) amin'ny an'ny Ray ny Zanaka; ao koa ireo mpanaraka ny homeisma izay mampianatra fa sahalahala (grika: όμοιος / hómoios) amin'ny Ray ny Zanaka.
Ny heteroosiana sy ny anomosiana
Ny antoko faharoa amin'ny arianisma dia ireo izay nilaza tsotra fotsiny fa hafa fomba na tsy mitovy sobstansa (grika: ἕτεροούσιος / heteroousios) amin'ny Ray ny Zanaka, na tena tsy mitovy aminy mihitsy (grika: ἀνὅμοιος / anomoios).
Fanoherana sy fanohanana ny arianisma
Fanoherana ny arianisma
Mba hamaliana ny fampianarana ariana dia namaritra ny finoana momba ny Trinite ny konsily natao tao Nikea ka nanambara fa ny Zanaka dia nateraka fa tsy natao, tsy noforonina ary mitovy sobstansa amin'ny Ray. Talohan'izany fotoana izany dia tsy mbola nisy foto-pampianarana neken'ny Fiangonana rehetra. Nohamafisina tamin'ny lalalan'ny fanamelohana ny arianisma ny fampianarana ny Trinite.
Fanohanana ny arianisma
Na dia nisy ny fanamelohana dia tsy nanjavona tsy akory ny fampianaran'i Ariosy. Noho ny ezak'i Eosebio avy any Kaisaria, lehilahy voalohany amin'ny mpanoratra ny tantaran'ny Fiangonana, izay nanda ny fanamelohana an'i Ariosy dia niantso an'i Ariosy avy any am-pialokalofana ny emperora Konstantio I tamin'ny taona 334. Tsy ela dia nisy olona roa manana ny maha izy azy izay nanohana ny arianisma, dia ny emperora Konstantio II (latina: Flavius Julius Constantius) sy ilay eveka sady teolojiana atao hoe Eosebio avy any Nikomedia, ary taorian'izany dia nanao toy izany koa ny patriarkan'i Konstantinopoly izay lasa iray amin'ireo lohan'ny fanohanana ny arianisma.
Rehefa maty i Kostantio II tamin'ny taona 361 ka i Valentio (na Valensa) no nanjaka ka nanenjika ny arianisma, dia nandresy amin'izay ilay fanapahan-kevitry ny kosily tao Nikea. Tamin'ny taona 379 ny emperora Teodosio dia tafaverina ka lasa fampianaram-pinoana marina indray ny Fanekem-pinoana nikeana tamin'ny konsily tao Kostantinopoly izay natao tamin'ny taona 381.
Ny nandova ny arianisma sy ny mitovitovy fijery aminy
Betsaka ireo fivavahana sy fikambanana kristiana izay nandova ny arianisma na mitovitovy fomba fijery aminy ka isan'izany ireto tanisaina manaraka ireto:
ireo Fiangonana kristiana onitariana manaiky ny fahefana moralin'i Kristy fa tsy ny maha Andriamanitra azy;
ny Fiangonan'Andriamanitra (Andro fahafito);
ny Mpianatry ny Baiboly naorin'i Charles Tazes Russell, izay nandray ny fampianarana avy amin'i George Storrs;
ny Fikambanan'ny Mpianatry ny Baiboly, izay nipoitra avy amin'ny asan'i Charles Tazes Russell;
ny Fihetsiketsehana Misionera Laika Anatiny, izay nipoitra avy amin'ny asan'i Charles Tazes Russell;
ny Vavolombelon'i Jehovah izay nipoitra avy amin'ny asan'i Charles Tazes Russell, ka mampitovy an'i Jesosy amin'ny anjely Mikaela;
ny Kristadelfiana izay mino ny fiteraham-birijiny an'i Jesosy sady mino ny fisiany talohan'ny nahaterahany amin'ny maha Teny azy;
ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany sy ny fikambanana hafa nipoitra avy amin'ny mormonisma, izay mino fa zavatra telo samy hafa manam-pomban'Andrimanitra ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.